Gudoomiyaha Guddiga Qaban-qaabada Shirwaynaha 8aad Ee Xisbiga Ahna Madaxa Xarunta Dhexe ee XDSHSI Oo Kawar Bixiyay Geedi Socodka Shirwaynaha. - Cakaara News
Jigjiga(CN) Talaado, Sep.30.2014, Gudoomiyaha gudiga qaban qaabada shirwaynaha 8aad ee xisbiga ahna madaxa xarunta dhexe ee xisbiga Mudane C/casiis Maxamed Cabdi ayaa sheegay in wakhti xaadirkan ay dhamaadeen hawlihii diyaar garowga shirwaynaha xisbiga ee lagu qabanayo xarunta gobolka Nogob ee Fiiq.
Waraysi ay maanta layeelatay shabakada Cakaaranews ayuu Mudane C/casiis sheegay in hada lagabagabeeyay hawlihii diyaar garowga shirwaynaha ee ay ku hawlanaayeen guddiyada qaban qaabada shirwaynaha.
Mar aan gudoomiyaha wax kawaydiinay xulitaankii ergooyinka shirwayanaha kasooo qaybgalaya ayuu yidhi " Guud ahaan waxaan hada dhamaystirnay diyaar garowgii, waxaa kale oo aan boqolkiiba 98% iyagana dhamaystirnay xulitaankii ergooyinka oo madaxoodii ugu horeeyay ay tagi doonaan maalinta barri ah hadii Alle yidhaahdo."
Mudane C/casiis Maxamed ayaa sidoo kale sheegay in xooga lasaaray islamarkaana ladiyaariyay hoolkii shirwaynaha, jiifka, cuntada, biyaha iyo guud aahaanba jawigii shirwaynaha oo aad u sareeya.
Shirwaynaha 8aad ee Xisbiga Dimuqraadiga Shacbiga Soomaalida Itoobiya oo kadhacaya magaalada Fiiq ayaa waxaa kasoo qayb galaya sida uu mudane C/casiis carabka ku dhuftay in kabadan 2000 oo qof iyadoo lagu macsuumay marti sharaf balaadhan oo ka imanaysa ururada uu xisbigu bahwadaagta layahay ee deegaanada dalka sida ay hada kahorba caadadu ahayd.